Iza moa izahay - Sand paompy, Sump Pump, Gravel Pump Manufacturer
JP Metal & Equipment Co., Ltd naorina tamin'ny 2006, dia lehibe matihanina-teknolojia avo orinasa mpanamboatra paompy anjara amin'ny fikarohana sy ny fanondranana slurry paompy, akanjo sy ny fitaovana sy ny harafesiny mahatohitra OEM fanodinana. JP vondrona paompy manarona mihoatra ny 40000 metatra tora-droa, ny voasoratra anarana renivohitra dia 18 tapitrisa yuan. Nandritra ny taona maro miaraka amin'ny hery matanjaka sy ny olona-mirona hevitra, dia tafarina Maro ny faran'izay tsara sy ny fitantanana ara-teknika talenta. Efa misy ny mpiasa dia olona mihoatra ny 220, izay 30% ny teknisiana. Afa-tsy, JP paompy no atao hoe toy ny faritany nandroso marika malaza sy ny siansa sy ny teknolojia ny fanavaozana orinasa. Ampiharina ISO9001: 2008 toetra rafitra fitantanana, JP paompy no nahazo ny anaram-boninahitra ny Hebei angovo sy ny fiarovana ny tontolo iainana mamonjy toeram-piasana. Noho ny mbola fanitarana ny mizana, ny orinasa efa lasa ny lehibe indrindra famatsian base slurry paompy ao amin 'ny orinasa tao Shijiazhuang.
JP paompy manana traikefa nandritra ny taona maro azo ampiharina eo amin'ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny slurry paompy. Mifototra amin'ny fampidirana sy ny mitroka vahiny mandroso ny teknolojia, ny vokatra andiam-tonga lafatra sy ny fandrakofam-baovao fampisehoana efa niforona. Amin'izao fotoana izao, ny tena dia ahitana vokatra andiana slurry paompy, FGD injeniera paompy manokana, vatokely paompy, asa fanadiovana y paompy, froth paompy, simika paompy ary vao lasa Pu fingotra. -Jatony no modely, ampiasaina amin'ny fitrandrahana be, mpampatsiro hanina, arintany fanasana, herinaratra, flue desulfurization mandatsa-dranomaso, asa fanadiovana y, injeniera ny rano, solika sy ny orinasa simika, monisipaly fitantanana, fiarovana ny tontolo iainana, ny fitsaboana sy ny maloto orinasa hafa.
Ny faritra famokarana mandrakotra ny faritra 24000 metatra toradroa, ny famokarana tanteraka fahafahan'ny isan-taona dia 10000 Output vondrona (milentika), ary ny isan-taona Output samy hafa rehetra avo chrome firaka castings dia 2000 tons.The famokarana dia zaraina ho faritra dimy distrika faritra iray sy roa toerana, izany hoe bobongolo fanariana, hafanana fitsaboana, machining tsara, hanorina welding sy ny fivoriana dimy coating ny faritra famokarana; vita piesy; kalitao fanadihadiana sy ny rano fanandramana. Ny tena ara-nofo ny vokatra: A05, A49, A33, A51 sy ambony hafa chrome ario vy fotsy.
Ny fampandrosoana ny vokatra famolavolana sy ny dingana fanomanana sy CAPP CFD mandany ny teknolojia. Ny fitsapana marina ny fahalotoana tsindry ambony fitiliana fiantsonan'ny dia niakatra ho any ISO9906 anivon'ny fametrahana mazava tsara, isan-karazany manohana avo-fametrahana mazava tsara ny fitaovana fitiliana, ary fitaovana fandalinana on.All fanariana mandany phenolic sy ny koronosy. Mandritra izany fotoana izany, mba hanatsarana ny kalitaon'ny slurry paompy rafitra, JP paompy mampiditra teknolojia vaovao ny sombin-javatra very fanariana. Ny fampiasana io teknika, ho etỳ ambonin'ny fahombiazana ny fanariana dia afaka tonga Ra3.2 mba 12.5μm; ny fanariana habe dia afaka tonga CT7 ny 9; ny machining hanina ho ambony indrindra dia ny 2mm 1.5. Ny fanariana Tsy misy tselatra, Burr sy ny fivoahana; izany izay miantoka ny fitaovana sy ny endriky ny faritra slurry paompy. Fitaovana amin'ny 1 taonina, 2 taonina, 5 taonina matetika kafa lafaoro lehibe, dia afaka mpanamboatra 8-10 taonina nanarato indray mandeha ny fotoana. Heat fitsaboana manampy atrikasa roa 20 toratelo fanoherana-karazana fitsaboana hafanana lafaoro lehibe. Maro amin'ireo fitaovana ireo milina CNC in machining atrikasa, ary misy ny 4.2M ary mitsangana lathe 4.5M ary maherin'ny 20 vondrona fitaovana milina. Ankoatra izany, dia misy isan-karazany ny hoisting fitaovana, fanapahana vy sy welding fitaovana, impeller ambaratonga Tuning fitaovana, koronosy fitaovana, sandblasting Nikosokosoka fitaovana mba hahazoana antoka ny fahafahan'ny famokarana.
JP paompy manatanteraka tanteraka ny rafitra fitantanana ISO9001 ka mitandrina ny dingan'ny fisafoana. Quality fanaraha-maso ireo firaketana an-tsoratra misy amin'ny famokarana rehetra dingana. Anisan'ny fitaovana Professional spectrometer, metallographic Analyzer, indro kely detector, milina fitiliana milina (aretina, fiantraikany, hamafin), andriamby flowmeter, tsindry habetsahan'ny, ammeter, hovitrovitra metatra, tabataba metatra, hydraulic andrana curve ny matihanina rindrambaiko. Perfect mamantatra miantoka ny hatsaran'ny fitaovana mba hahazoana antoka fa ny tsirairay dia paompy sy ny faritra tanteraka mifanaraka amin'ny fepetra takiana.
JP paompy efa niely tsena anatiny rehetra any Shina ny 30 faritany sy ny kaominina. Soa aman-tsara ihany koa dia nampiasaina tamin'ny firenena 20 ao amin'ny Global .First tsipika mpiasa manana traikefa matihanina mba hanome asa fanompoana ho an'ny mpanjifa. Mialoha fivarotana fanompoana: mitambatra ny tena asa toe-piainana, dia afaka manome asa Consulting sy ny antonony indrindra famolavolana drafitra. Ao amin'ny fivarotana ny asa: mpanjifa-mifantoka, dia manome maso, fanaraha-maso sy ny fanovana ny famolavolana drafitra. Taorian'ny-fivarotana fanompoana: dia manome asa feno ao anatin'izany ny fametrahana sy ny fanirahana ny fitaovana, mpiasa fiofanana, piesy tolotra sy ny asa hafa.
Enterprise fampandrosoana foto-kevitra :
Ho an'ny orinasa: olona mitodika
Fa ny entana: tahaka matanjaka toy ny vatolampy
Fa ny tsena: mahomby zava-baovao
Fa mpanjifa: tsy tapaka
JP paompy dia manaraka tsy fivadihana, fanavaozana, fahombiazana, ny fiaraha-miasa ny fanahy sy ny "mamorona zava-dehibe ho an'ny mpanjifa" filozofia raharaham-barotra. Tonga soa eto amin'ny namana mba hitsidika ny orinasa ary miandrandra ilay miara-miasa aminao mba hamoronana hoavy tsara kokoa.